Akụkọ - Ihe nchara edo edo
Ìhè acha granite ngwọta
Osisi na-acha uhie uhie na nkume nchara bụchacha granite nke usoro lamellar. Na mgbakwunye na nsị mmiri na-achakarị nke granite, n'ihi agba ọcha na-acha ọcha, a ga-enwe ntụpọ mmiri ma ọ bụ mmetọ, na nchọta mmiri adịghị mfe ịpụ. Ke adianade do, n'ihi nkume a na-esonyere ya na ígwè na-arụsi ọrụ ike na nkume ahụ, gburugburu ebe obibi mmiri ga-eduga nchara. N'ihe banyere itinye nkume na nọọsụ, anyị nwere ahụmịhe bara ụba ma gbakọba, na ahụmịhe ndị a na ngwaahịa na teknụzụ metụtara ya. Kemgbe ọtụtụ afọ nke mmepụta ngwaahịa na ihe ọhụrụ, Usoro Ndozi Nkume anyị aghọwo nhọrọ a pụrụ ịtụkwasị obi nke ụlọ ọrụ metụtara nkume na China na ụwa.
A na-ejikọta nchara nchara- A na-ejikọta ihe ọcha na-acha ọcha na igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, na ọrụ nke mmiri na-aga n'ihu na-acha odo odo, arụmọrụ ikpeazụ na elu okwute bụ mpempe ma ọ bụ mpempe nchara. Mmiri na-akpata nchara sitere n’otu isi ihe na-akpata nchara, yabụ mgbe ụfọdụ ị ga-ahụ mmiri ahụ ị ga-ahụ nchara nchara ahụ.
Mmetọ- Mkpụrụ ọcha na-enwe mmetụta n'ahụ mmetọ ọ bụla, yabụ a ga-ewepụ oge ọ bụla mmetọ mmiri nke na-abanye na flax ọcha n'oge. Ndị na-emetọkarị ntụpọ bụ ụcha agba na mmanụ mmanụ. Maka ụfọdụ ihe nhicha nwere ihe dị iche iche iji jiri nlezianya mee ihe, mgbe ndị a na-abanye n'ime ụlọ nkume, ga-egosikwa otu ihe ahụ mmetọ mmanụ.
Ekwesịrị ịhọrọ ndị na-agbakwunye ihe mgbaze. Na teknuzu ndeksi, ọ bụghị naanị na mmiri na-eguzogide kwesịrị ịdị elu, ọdịiche dị n'etiti ndeksi nke acid na alkali na-eguzogide na ndeksi nke mmiri na-eguzogide kwesịrị obere, zere n'ụzọ ọ bụla ekwesịghị iwere mmetụta nke mmiri mmiri dịka ihe ndabere maka ikpe ikpe kachasị mma na nchedo dị njọ.
Efere ahụ ga-abụ nkụ tupu etinye ihe mkpuchi ahụ.
Usoro nchebe nke ụlọ ahịa na-acha ọcha hemp chọrọ ka akụkụ 6 na-emeso ya, gbakwunye ọrụ nchapu ugboro abụọ. E kwesịkwara iji nlezianya see akụkụ ahụ.
Mgbe a na-ekpuchi onye na-echebe nchebe n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ kwesịrị ịdịgide ụbọchị atọ mgbe ụzọ ahụ gasịrị, ọnọdụ okpomọkụ dị na 5-15 ℃ mgbe oge ọgwụgwọ gafere ụbọchị 7, zere iji mezuo oge a kara aka ga-ehicha efere nke onye ọrụ nchekwa ozugbo. okporo ụzọ.
E kwesịrị ijikọ akụkụ dị n'azụ nke ụlọ ahụ ma wusie ya ike iji mee ka mmetụta nke onye na-echebe ihe na mado ciment mado.
The nkume ihe onwunwe elu mgbe ụlọ ahịa na-arụnyere achọghị itinye machie, mpụta na-ventilated nso, osisi onuete arụnyere na shop mgbe 3 izu ike na-agbakwunyere jupụta.
Nlekọta nke ala hemp na-acha ọcha kwesịkwara ị attentiona ntị na njikwa mmiri, dịka o kwere mee iji sụgharịa mmiri. Ọ bụrụ na a ga-eji mmiri mee ihe, hichaa ya iji gbochie mmiri ịbanye n'ime azụ bọọdụ ahụ n'akụkụ mmiri ahụ.
Mpaghara mmebi obodo. Ndị na-ehicha acidic kwesịrị ekwesị dị oke ize ndụ karịa ndị na-ehichapụ alkaline ma a ga-atụgharị ya na mmiri dị ka o kwere mee.
Ọrụ ndị ọzọ dị na ala iji kpuchido ala, dị ka agba mgbidi na mmiri iko ga-emetọ ala.
Ka ịhọrọ ahịhịa electrostatic kwesịrị ekwesị iji mesoo ala, ma ọ ga-emetọ ala.
Post oge: Jun-24-2020